Imiceli mngeni kwishishini kunye namathuba nge-COVID-19 Ubhubhane | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 6, 2020 NgoLwesibini, Oktobha 6, 2020 Douglas Karr
Iminyaka eliqela, ndilwenzile olo tshintsho kukuphela kwento ekufuneka abathengisi bonwabe kuyo. Utshintsho kubuchwephesha, kwimidiyamu nakwezinye iindlela ezongezelelekileyo yonke imibutho icinezelwe ukuba ihlengahlengise iimfuno zabathengi kunye namashishini.
Kwiminyaka yakutshanje, iinkampani bezinyanzeliswa ukuba zibonakalise elubala ngakumbi kunye nabantu kwiinzame zabo. Abathengi kunye namashishini aqala ukwenza amashishini ukuze ahambelane neenkolelo zawo zokuziphatha okuhle kunye nokuziphatha. Apho imibutho ibikade yahlulahlula iziseko zayo ekusebenzeni kwayo, ngoku kulindelwe ukuba injongo yombutho kukuphucula uluntu lwethu kunye nokukhathalela okusingqongileyo.
Kodwa ubhubhane kunye nokutshixeka okunxibeleleneyo kuye kwanyanzela utshintsho olungalindelekanga ebesingalindelanga. Abathengi ababekhe baneentloni ukwamkela urhwebo nge-e bathontelana kulo. Iindawo zentlalo ezinje ngeendawo zemisitho, iivenkile zokutyela, kunye neemovie zemiboniso bhanyabhanya ziyekile ukusebenza-uninzi lunyanzelwe ukuba luvalwe luphela.
COVID-19 Ukuphazamiseka kweshishini
Ambalwa amashishini angaphazanyiswa ngoku sisibetho, ukudideka kwezentlalo, kunye notshintsho kubathengi nakwindlela yokuziphatha kwishishini. Ndizibonele ngokwam ukutshintsha okukhulu kubathengi kunye noogxa:
Umntu osebenza naye kwishishini lesinyithi wabona iikhondomu kunye nokuthengisa kunye nokugcina iimpahla kwi-ecommerce kwaqhuba konke ukukhula komyalelo wakhe.
Umntu osebenza naye kwishishini lesikolo kuye kwafuneka aqhube zonke izinto abathengisa kuzo ngokuthe ngqo kubathengi njengoko izikolo zitshintshela kwi-intanethi.
Umntu osebenza naye kwishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba kuye kwafuneka aqhubane ukuze ahlengahlengise iindawo zawo ukuze zihlale ngakumbi kwiishedyuli zomsebenzi eziguquguqukayo apho abasebenzi bamkelekile khona ukuba basebenze ekhaya.
Oogxa abambalwa kwishishini lokutyela bavale amagumbi abo okutyela batshintsha bakhupha kunye nokuthengisa kuphela.
Ugxa wakhe kwafuneka ayile kwakhona i-spa yakhe yeendwendwe ezizodwa kunye nokucoca iifestile phakathi kwabaxumi. Siphuhlise i-ecommerce epheleleyo kunye nesisombululo sokucwangciswa kwaye saqala ukuthengisa ngokuthe ngqo, ukuthengisa nge-imeyile kunye neendlela zokukhangela zasekhaya-into angazange ayidinge ngaphambili kuba wayeneshishini lokuthetha ngomlomo.
Ugxa wethu kwishishini lokuphucula amakhaya ujonge abathengisi bonyusa amaxabiso kunye nabasebenzi abafuna umvuzo ongaphezulu ngenxa yokuba ibango lokuphucula ikhaya (apho sihlala khona ngoku kwaye Umsebenzi) kutyalwe imali eninzi kuwo.
Nokuba iarhente yam entsha kuye kwafuneka iyitshintshe ngokupheleleyo intengiso kunye nentengiso. Kunyaka ophelileyo, sisebenze kakhulu ekuncedeni amashishini aguqule amava abo kubathengi. Kulo nyaka, konke malunga nokuzenzekelayo kwangaphakathi, ukusebenza ngokuchanekileyo, kunye nokuchaneka kwedatha ukunciphisa umthwalo womsebenzi kubasebenzi abangakhange babekiwe.
Le infographic evela iselfowuni, Umboneleli weSMS ofikelelekayo kumashishini amancinci, aphakathi, namakhulu achaza ifuthe lobhubhane kunye nokutshixwa kwesiqalo, ukurhweba, kunye namashishini ngokweenkcukacha.
I-COVID-19's Iimpembelelo ezimbi zoQoqosho
Ngaphezulu kwama-70% okuqala kuye kwafuneka baphelise iikhontrakthi zabasebenzi abasisigxina ukusukela oko kwaqala ubhubhane.
Ngaphezulu kwama-40% okuqala anemali eyaneleyo kwinyanga enye ukuya kwezintathu zokusebenza.
I-GDP inesivumelwano se-5.2% ngo-2020, isenza ukuba ibe luluqoqosho olunzulu kwihlabathi liphela kumashumi eminyaka.
Amathuba eshishini e-COVID-19
Ngelixa amashishini amaninzi ekwimeko emaxongo, kukho amathuba athile. Ayizukukhanyisa ubhubhane-olubi kakhulu. Nangona kunjalo, amashishini akakwazi ukuphosa itawuli. Olu tshintsho luphawulekayo kwimeko-bume yeshishini aluzomisanga lonke ibango- kukuba ishishini kufuneka lijikeleze ukuze lizigcine liphila.
Amanye amashishini abona ithuba lokutshintsha indlela asebenza ngayo:
Ukwamkela imodeli yesisa yokunikela ngezixhobo eziyimfuneko kunye neenzuzo kwabo basweleyo.
Imisebenzi yokuvuselela ithuba lokuthatha inxaxheba kubemi abasebenza ekhaya abafuna ukuhanjiswa kokutya kunye nokubonelelwa.
Ukukhuthaza intengiso ukutshintsha ibango ukusuka ekuqhubeni ukuthengisa ukuthengisa ukuya kutyelelo lwedijithali ngokucwangciswa kwe-Intanethi, i-ecommerce, kunye neenketho zokuhambisa.
Ukukhuthaza ukuvelisa ukubonelela ngezixhobo zococeko kunye nezixhobo zokukhusela.
Ukuguqula iindawo zokusebenzela ezivulekileyo kwiindawo ezinendawo ekhuselekileyo yokuhamba-hamba kunye neyabucala, ukunciphisa amacandelo okuncokola.
Ukwazi indlela yokuphendula kule meko kuya kwenza ukuba inkampani yakho ihambe kulo bhubhane. Ukuze uqalise, isikhokelo esingezantsi siza kuxoxa ngemiceli mngeni ojamelana nayo okanye osele ujongene nayo kunye namathuba ekufuneka ucinge ngokuwathatha.
Ushishino phakathi kwe-COVID-19: Imiceli mngeni kunye namathuba
Amanyathelo ama-6 okuPivot kwiShishini lakho
Amashishini kufuneka aqhelane nokwamkela, kungenjalo baya kushiyeka ngasemva. Asizukuphinda sibuyele kwimisebenzi yangaphambi ko-2020 njengoko amashishini abathengi kunye nokuziphatha etshintshe ngonaphakade. Nanga amanyathelo ama-6 anconyelwe yiMobile360 ukukunceda ubone ukuba iqela lakho linokuthini ukuze liqhubeke phambili neendlela ezikhoyo:
Iimfuno zabaThengi boPhando -Thabatha ukuntywila ngokunzulu kwisiseko sabathengi bakho. Thetha nabona bathengi bakho kwaye uthumele uphando lwethu ukuchonga indlela onokubanceda ngayo abathengi bakho.
Yakha abasebenzi abaFlexible Ukukhutshwa kwabasebenzi kunye neekhontrakthi kunokuba lelona thuba lihle lokunciphisa iimfuno zokuhlawulwa ezinokuchaphazela ukuhamba kwemali yenkampani yakho.
Imephu yokuThengiswa kweeNkonzo zakho -Thathela ingqalelo imida yokushishina ejongene neshishini lakho. Uya kucwangcisa njani ukulawula kwaye usebenze malunga nefuthe?
Yenza ixabiso elabiweyo Ngaphandle kwezibonelelo zakho, nxibelelana notshintsho oluqinisekileyo umbutho wakho uzisa uluntu kunye nabathengi bakho.
Hlala ngaphaya -Mkela isicwangciso sonxibelelwano esicacileyo nesinethemba esiqinisekisa ukuba wonke umntu unyuka, ezantsi, nakwintlangano yakho uyayiqonda imeko yeshishini lakho.
Inguqu Digital -Yandisa utyalo-mali lwakho kumaqonga edijithali, oomatshini abazisebenzisayo, ukuhlanganiswa, kunye nohlalutyo ukulungiselela ukusebenza kwakho. Ukusebenza kwangaphakathi ngamava abathengi kunokukunceda woyise kwaye wandise inzuzo njengoko amashishini kunye nabathengi ngokufanayo betshintsha indlela abaziphethe ngayo.
tags: ishishinii-covid-19gdpkwi-infographicAmazingizibalo zokutshixaiselfowunibhubhaneubalo lwezifoi-SMS